Ideas de paleta de colores र Color्ग प्यालेटको परिचय
र Color्ग प्यालेटको परिचय
निर्दयी र Pale्ग प्यालेट शोषण रणनीतिहरू
सामान्यतया, बैजनी ज्ञान, रचनात्मकता, स्वतन्त्रता, जादू र रहस्यको साथ सम्बन्धित छ। हाम्रो (कलात्मक) नियन्त्रण अन्तर्गत बैजनी हुनु गाह्रो देखिन्छ। स्वास्थ्य र पैसाको बारेमा हरियो सल्लाह, र बैजनीले ज्ञान, रोयल्टी र सम्मान सुझाव दिन्छ। मेरो बैजनी तिम्रो बैजनी होइन। किनभने बैजनी र warm्ग कडा तातो र चिसो र comb्गको संयोजनबाट सिर्जना गरिएको हो, यसले दुबै गुण राख्दछ। र purp्ग बैजनी प्रकृतिमा विरलै देखापर्दछ र यसको फलस्वरूप प्राय: यसलाई पवित्र अर्थको रूपमा लिइन्छ। दोस्रो बैजनी र color (रातो र wheel र wheelमा पा blue्ग्रामा पाइएको) र खरानी र ofको रंगले दुवै प्राथमिक निलो र तातो रातो प्राथमिक चिसो सँगै पिघल गर्दैछ।
शीर्ष र Color्ग प्यालेट विकल्पहरू
एकचोटि तपाईंले रंगहरू सेट गर्नुभयो, र व्यक्तिहरू तपाईंको ब्रान्डको बारेमा जान्दछन्, तपाईं त्यो रंगको लागि सम्झन सक्नुहुन्छ। धेरै व्यक्तिहरू निलो उनीहरूको मनपर्ने रंग हो भन्दछन्। यो धेरै व्यक्तिको मनपर्ने रंग हो, तपाईं तुरून्त व्यापक श्रोतालाई अपील गर्न सक्नुहुन्छ। हल्का र्ग पाठको लागि धेरै गाढा र colorको साथ पृष्ठभूमिको लागि उत्तम हो। यो एक्सेन्ट र colorsहरू, कार्यको लागि कलहरू, वा जहाँसुकै पनि उनीहरूको ध्यान आकर्षण गर्नका लागि उत्तम छ। अन्तमा, तिनीहरूले उच्चारण रcentहरू डिजाईन गरेर धेरैमा कम चासो देखा पर्‍यो।
रंग प्यालेट – कहानी
कसरी तपाइँको अनुप्रयोगको लागि सहि र color छनौट गर्ने कसरी तपाइँको अनुप्रयोगको लागि सहि र choose छनौट गर्ने दर्शकहरूको धारणा पहिचान गर्नुहोस् जबकि केही र aहरूको विश्वव्यापी अर्थ हुन्छ, धेरै र colorsहरूको विभिन्न स्थानीय धारणा हुन्छ। अनुप्रयोगको र colors्गहरू एप्लिकेसन र उद्देश्यको सामग्रीसँग समन्वय हुनै पर्छ। तपाइँको अनुप्रयोगको लागि गलतफिट र meaning्गको कारण विनाशकारी परिणामहरू निम्त्याउन सक्छ।
कसरी र Color्ग प्यालेटको साथ सुरू गर्ने?
मानिसहरूले पहिलो स्थानमा र color देख्छन्, त्यसैले सबै कुरा गौण हो। अवश्य पनि, तपाईले वास्तवमै मनपर्ने रंगहरू छनौट गर्न चाहानुहुन्छ। रको जन्मजात कृत्रिम उपस्थिति छ जुन प्रकृतिमा यत्तिको यथार्थमा आफ्नै मुठभेड बनाउँदछ। केहि र colors्गले हाम्रो मुड परिवर्तन गर्न सक्दछ, वा हाम्रो शारीरिक स्थितिलाई पनि असर गर्न सक्छ। उत्तम पूरक रंग र दर्शन तपाईंको अनुप्रयोगको लागि एक आत्म-मार्केटिंग उपकरण बन्नेछ।
खण्डित र Color्ग प्यालेटको इतिहास
जब तपाइँको ब्लगमा नयाँ आगन्तुकहरु अवतरण हुन्छन्, उनीहरूले व्याख्या गर्ने पहिलो चीजहरू र are्ग हुन्छन्। कोठा, घर वा कार्यालय भवनको शक्तिमा र color्ग प्रयोग गर्न तपाईंको वातावरण र विशेष गरी तपाईंमा ऊर्जा सुधार गर्ने सजिलो तरीका हो। यो सजिलैसँग संसारको तर्फ जानाजानी कम्पनहरू विकिरणको लागि प्रयोग गरिन्छ। एप्लिकेसन आइकन र colors्गले अनुप्रयोग उपयोगिता ठूलो र स्पष्ट अभिव्यक्त गर्नुपर्दछ।
प्यालेटको रंग कसरी छनौट गर्ने
तपाईको भान्छाको र color्ग प्यालेट अद्यावधिक गर्दै विस्तृत ओरेसस्पेंसी हुनुपर्दैन। एउटा र p्ग प्यालेट मूलत: २ वा colors र colors्गको चयन हो जुन तपाइँको ब्रान्डको लागि जताततै प्रयोग गर्न सकिन्छ। हाम्रो रंग प्यालेट मुद्रित सामग्री, प्रचार आइटम र अनलाइन रिक्त स्थान सहित सबै मीडिया मा एक एकीकृत मोर्चा प्रस्तुत गर्दछ। तपाईंले आफ्नो रंग प्यालेट परिभाषित गर्नुपर्नेछ र र to्ग तीनमा सीमित गर्नुहोस्। SECONDARY रंग प्यालेट PALETTESA रंग समर्थन सीमित प्रयोगको साथ अनुमति छ।
अर्को, म छवि र colorर पिकर निम्न प्रकारको प्रयोग गर्नका लागि प्रयोग गर्नु पर्ने विधिहरू म वर्णन गर्छु।
१. “तपाईंको छवि चयन गर्नुहोस्” मा क्लिक गर्नुहोस्, र त्यसपछि तपाई र code्ग कोड र लोड जान्न चाहानुहुन्छ छवि चयन गर्नुहोस्।
२. खाली छविमा नाम लेख्नुहोस्, “छवि नाम प्रविष्ट गर्नुहोस्” पछि।
Then. त्यसपछि “पठाउनुहोस्” मा क्लिक गर्नुहोस्।
त्यस पछि, प्रमुख र sequ्ग अनुक्रम, र examples उदाहरणहरू, हेक्साडेसिमल र Rहरू, आरजीबी र colorहरू र रंग नामहरू पूर्ण छन् र तालिकामा पूर्ण छन्।
कसरी ?? यो सजिलो छ, हैन?
तपाईंसँग धेरै फोटोहरू अपलोड गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। र तालिकामा उत्पादन गरिएको रंग संयोजनहरूको नतीजा अवलोकन गर्नुहोस्। तपाईंले अपलोड गर्नुभएको छविले सबै प्रमुख रंगहरू, हेक्साडेसिमल रंग, आरजीबी र and र र alsoको नाम पनि देखाउँदछ।
Esta "र Color्ग प्यालेटको परिचय" el gráfico tiene 20 colores dominados, que incluyen . Hace una combinación de colores tan hermosa inspirada en esta imagen.